မုန့်စိမ်းပေါင်း | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
9 comments on “မုန့်စိမ်းပေါင်း”
27/09/2014 @ 9:19 am
အ ရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
27/09/2014 @ 10:14 am
27/09/2014 @ 10:21 pm
Thank you so much for the recipe! Can you please tell me approximately how many cups in 300 g of coarse rice flour?
29/09/2014 @ 10:49 pm
11/10/2014 @ 7:06 am
အောင်မလေး အမရေ ည သန်းခေါင်အချိန်မှဒါလေးကိုဖတ်မိလို့ ပျော်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ ။ လင်မယား၂ယောက်စလုံး မုန့်စိမ်းပေါင်းစားချငိနေကြတာ ။တခါက သူများတငထားတာလေး FB မှာဖတ်မိတာ အရမ်ူခက်သလိုပဲ။ အခု အမ နည်းလေးကUSကလူတွေအတွက် အဆင်ပြေလိုက်တာ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။ မနက်ဖြန်အိပ်ယထတညနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်
11/10/2014 @ 7:10 am
Course rice flour ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဒီမှာရှိတဲ့ ဆန်မှုန့်တွေက ဆန်ကြမ်းဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်
14/10/2014 @ 7:39 am
အမ ရေ..လုပ်ပါဦး မုန့်ကပွပွဖွာဖွာကြီးဖြစ်သွားတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲသိဘူး
14/10/2014 @ 7:50 pm
then hv to addabit of water or coconut milk sis 🙂
18/10/2014 @ 8:22 am
အမ ဆန်ကြမ်း ကဘယ်လိုမျိုးလဲ အိမ်မှာ ဆန်မှုန့်၂မျိုးရှိတယ် နဲနဲဖွာတာ ဆန်ကြမ်းထင်တာပဲ ။ ဘယ်လိုရှာဝယ်ရမလဲ ပြောပြပါဦးနော် ။ ပြီးတော့ ရေနဲနဲပိုထည့်ရင် blender မှာလုံးထွေးထွေးဖြစ်သွားတယ်။ ဆန်အမျိုးစား မှာ လိုလို့ထင်တယ်နော်